दशैं टिकटमा मनपरीः कोही रित्तो हात फर्किँदा, कोहीलाई फालाफाल ! « Bikas Times
दशैं टिकटमा मनपरीः कोही रित्तो हात फर्किँदा, कोहीलाई फालाफाल !
काठमाडौँ : गोंगबु बसपार्क पुगेका अर्घाखाँचीका सयौज पोख्रेल टिकट काउन्टरमा पुगे । अर्घाखाँची सन्धीखर्कका लागि टिकट दिनुस् भनेर काउन्टरका कर्मचारीसँग टिकट मागे । काउन्टरका कर्मचारीले भने– ‘२७ गतेको टिकट प्याक छ । बिहानै आउनुहोला । गाडी थप गर्छौं ।’ अन्ततः सयौज टिकट नै नलिई रित्तै हात फर्किए ।
घर जान टिकट लिन बसपार्क पुगेका केशव पाण्डेले भने– ‘के गर्नु अग्रिम टिकट पूरै प्याक छ भनेर जवाफ पाएँ । अब क्याबिनमा मात्रै सिट छ रे ? क्याबिनमा त सात जनासम्म राख्छ । पोहोर पनि दुःख पाएको हुँ क्याबिन भनेर ।’ रोल्पा लिवाङ जाने तयारीमा रहेका पाण्डे पनि केही समय अलमलिए तर, टिकट पाएनन् असोज २९ को ।
नेपाल समाचारपत्रको टिम बसपार्क पुग्दा टिकट काउन्टरमा कार्यरत कर्मचारीले फोन आएकै भरमा आफ्नो सर्टको गोजीबाट पाँचवटा अग्रिम टिकट आफ्ना नजिकका मान्छेलाई उपलब्ध गराएका थिए । यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।